“Ireo Gaulois Razantsika” Naverin’ireo Mpahay Tantara Sy Ny Karaiba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2016 18:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Español, Français
Asterix sy Obelix, Gaulois avy amin'i Amer Béthune- sehatra hoan'ny daholobe
Nanomboka ny fampielezan-kevitra hoan'ny fifidianana filoham-pirenena i Nicolas Sarkozy ary tsy nitsitsy fanambarana mampivanàka.
Teo am-pihazana vato any amin'ny elatra ankavanana amin'ny antoko politikany, manamafy ilay fanambarany farany nampametra-panontaniana fa “raha vao tonga Frantsay, Gaulois izay ny razantsika “. . Tsy dia mitombina ilay fanambarana raha ny marina, satria toa sarotra ihany ny hanova ny tetiarana eny an-dalana. Nefa ao ambadiky ny famakiana ny fambaran'ny kandida LR hoan'ny fifidianana 2017, ny fehezanteny “Ireo Gaulois razantsika ” dia manana ny tantarany sy dikany izay finiavan'ny filoha teo aloha tao anatin'ny vanim-potoan izay mandrisika fisarahana amin'ny samy mpiara-monina ary manamafy ny toa fahitana manana hafainganam-pandeha roa samihafa.
Koa taiza ary no niavian'ny fehezanteny “Ireo Gaulois razantsika ” ary atao ahoana no fahazoana azy?
Fehezantany tafiditra tao anatin'ny boky tantaran'ny Repoblika Fahatelo (fotoana fohy taorian'ny taona 1870) teo ambany fitarihan'i Ernest Lavisse izay manazava ilay safidy toy izao::
Nisy tononkalo tany amin'ny fotoana lasa efa ela be, izay tokony arotsaka ao anatin'ireo fanahy tanora mba hanamafisana ny fihetsehampo fitiavan-tanindrazana. Ndao asaina tiavin-dry zareo ireo Gaulois razantsika sy ny alan'ny pretra mpampianatra, Charles Martel any Poitiers, Roland any Roncevaux, Godefroi de Bouillon any Jerosalema, Jeanne d'Arc, Bayard, ireo mahery fon-tsika fahiny, na dia nofonosina angano aza, satria loza fa adino ireo anganontsika.
Ny olana anefa, dia ity fanambarana miparitaka any anatin'ny boky tantara hatramin'ny taona 1980 ity dia tsy marina, toy ny anazavan'i Suzanne Citron mpanoratra ny boky, ‘Ny Anganom-pirenena’. Ny tantaran'i Frantsa naverina nojerena:
Efa lany andro ity famakiana ny lasan'ny frantsay ao anatin'ny tabilaon'ny Gaule izay hanambara mialoha ny “firenena” ary tsy hoe tsy misy akony ratsy. Amin'ny lafiny iray, mamaritra ny lasa hanodidina an'i Frantsa irery, ary manilika hiala amin'io lasa io izay rehetra any ivelan'ny faritry ny taniny, toa an'i Karaiba, eny na ny Corse.
Nomeny kalitao atao hoe majika amin'ny anaran'ny tetiarana taloha izay midika ho fahamboniana ny faharetan'ny fisiana tao amin'ny tanin'i Frantsa izay noeritreretina ho “gaulois”. Amin'ny lafiny iray hafa, ary ity no tena ratsy indrindra, manindrahindra an'eritreritra ny ‘tena’ firenena ny fiheverana ny fiaviana “Gauloise” ary mandà ny fahasamihafana ara-poko sy kolontsaina izay niaraka tsy tapaka tamin'ny famoronana ara-tantara an'i Frantsa.
Ny “Gaule celtique” avy amin'ny contreculture – sehatra ho an'ny daholobe
Mathilde Larrere, mpahay ny tantaran'ny Revolisiona sy ny maha-teratany, manasongadina ny (efa) maha-lany andro ilay fehezanteny nandritra ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany :
5) “Mantra” iray nampianarina tany amin'ireo sekolin'ny Repoblika fahatelo, ary koa tany amin'ny fialantsasatra, izay nahavariana tokoa.
Miaro tena amin'ny adihevitra miha mitombo hatrany i Sarkozy amin'ny filazana hoe: :
Midika izany fa misy tantara iray momba ny firenena, fa io tantaran'ny firenena io tsy voatery ho ilay marina ara-tantara amin'ny antsipirihany, fa tantaran'ny firenena nofenoina maherifo izay nandrafitra an'i Frantsa, ary rehefa zanaky ny olona avy any Hongroà iray na zanaky ny Alzeriana iray ka tonga any Frantsa ianao, dia tsy ampianarina nanao ny tantaran'i Hongria na Alzeria, ny tantaran'i Fantsa no ampianarina anao. Ny fampanarahana ny eritreritra tokana amin'ny zo ho amin'ny fahasamihafana dia efa ampy.
Apetrak'i Sarkozi araka izany ny fanekena ity tantaran'i Gaule hoan'ny rehetra ity ho toy ny dingana ilaina amin'ny hahavoaray ho ao anatiin'ny firenena frantsay. Araka izany ary, ahoana no fandraisan'ny Frantsay izay tsy misalasala mino fa tsy Gaulois ny razamben'izy ireo ity fehezantenin'i Nicolas Sarkozy ity?
Sary momba ireo razambe gaulois avy amin'i Aimer Béthune – Sehatra ho an'ny daholobe
Thomas Snégaroff, mpampianatra tantara, manonona ny poeta Aimé Césaire avy any Martinika ao amin'ny resaka momba “ireo Gaulois razantsika “:
Fony ianao 6 taona, rehefa mamaky boky hoe ny razanao dia Gaulois, ary manana volo mavo sy maso manga izy ireo … Dia nihomehy fatratra izahay sy ny mpampianatra . Mainty hoditra sy miteny Kreola izahay alohan'ny zava-drehetra.
Josette Borel-Lincertin, filohan'ny Filankevitry ny Departemantan'i Goadelopy, milaza ny heviny ny amin'ny « “fijery tery an'i Lafrantsa” »:
Ny repoblika izay arovantsika dia tena ilay mahavita mankalaza ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafana ary azo antoka fa tsy ilay hametraka ilay fijery tery an'i Frantsa, amin'ny maha-izy azy sy ny tantarany. Mampalahelo ahy izao taim-bavan'ny kandida izao, ao anatin'ny hazakazaka arahin-tosika ataon'izy ireo amin'ny mpifidin'ny “Front national”, lasa manohana hevitra mihemotra tanteraka, mitambotsitra tanteraka ary fomba fijery diso tanteraka amin'ny lafiny ara-tantara.
Miresaka ireo Frantsay nivoaka tamin'ny zanatany fahiny koa i Jean-Christophe Lagarde, filohan'ny UDI :
izay ny ray aman-dreny sy ny raibe ary ny reniben'izy ireo no niady mba haha-tany afaka antsika ankehitriny. Angano noforonina ara-tsiantifika izy io, tsy nisy ny mponina avy any Gaule. Fifangaroan'olona maro be izy ireo. Ny famaritana ny olom-pirenena Frantsay dia ny mizara ny soatoavin'i Frantsa, ny fahafahana, ny fitoviana, ny firahalahiana ary ny maha-laika.
Farany, Myriam Cottias, tomponandraikitry ny Ivontoerana Frantsay voalohany fikarohana iraisam-pirenena momba ny fanandevozana no manazava ny antony mampavesatra ny hevitra miafin'ity fehezanteny ity ho an'ny Karaiba nandritra ny fihaonambe iray momba ny fanandevozana::
(..) nifidy ny lohateny ho an'ity fihaonambe ity Ireo Gaulois razantsika …Frantsa sy ny fanandevozana ankehitriny. . Ho an'ny mponina avy any Karaiba, misy dikany izany. Tsy fantatro na mitovy amin'izany no mitranga any ivelan'i Karaiba, fa miteraka fanontaniana tena goavana ilay raikipohy: ny fahafahana mamerina indray, ao anatin'ny làlana ara-tantara, ny fifandraisan'i Karaiba amin'i Frantsa mba hanandrana hieritreritra fifandraisana izay tsy horaisina avy any anatin'ny fifandraisana ara-panjanahana. Toy izao ny fandikana azo tsapain-tanana [ny ireo Gaulois razantsika ]: lasa ho Frantsay tanteraka ireo andevo fahiny. Izany no antony nahatonga ny ‘Ireo Gaulois razantsika ” ilay angano mpanorina frantsay, ho nampianarina tany amin'ny zanatany. Nanjary tonga Frantsay i Karaiba ary nivoatra tao an-toerana sy nifototra tamin'ny fanadinoana ny fanandevozana. Mety ho ara-politika ihany ilay teny filamatra satria tsy mitombina ilay fanadinoana, indrindra raha mbola mitovy ihany ny rafitry ny asa, ary mitovy ihany ny ambaratongam-pahefana ara-poko nolovaina tamin'ny fanandevozana. Ny tsy nampoizina araka ny fahitako, dia ilay kabary mitambabe, miraletan'ny Repoblika no hiteraka izany fanadinoana izany.